🥇 ▷ # CES2020: Razer Tomahawk, oo ah kombuyuutar ciyaar kombuyuutar oo heer sare ah ✅
# CES2020: Razer Tomahawk, oo ah kombuyuutar ciyaar kombuyuutar oo heer sare ah
Wararka ka Las Vegasla CES 2020 Awood buuxda, waxay noo keenaan iskaashi Intel iyo hogaamiye caalami ah oo ku habboon qalabka ciyaartoy, desktop ciyaar ciyaar. Waa Razer Tomahawk. Kooxdii ugu horreysay ee lahaata xad-dhaaf ah sanduuq Razer Tomahawk N1.
Razer Tomahawk, waa fikrad cusub oo loogu talagalay kumbuyuutarrada desktop-ka
Waxaa jira waxyaabo cusub Razer horseedaa CES2020laakiin waxaan ku joojin doonnaa rafcaanka PC Miis modular ah oo lagu soo bandhigay caasimada Mareykanka. UU. Kombuyuutar ayaa uga mahadcelinaya chassis cajiib ah, oo lagu arkay qaabka ugu fiican shirkadda, oo leh hawo Qurux badan, fudud iyo aad u adag.
Sanduuqan iskujira Razer Tomahawk N1 la Intel® NUC 9 element compute computeWaxay ku faani kartaa naqshad casri ah, oo ay ugu mahadsan tahay jirkeeda gaarka ah aluminium waxaana wanaajiyay muraayadda muraayadda indhaha ee qabowga garaaca labada dhinac.
Iyadoo a qalabka Heerka ugu sarreeya ee isku dhafan, kuwa ugu xiisaha badan waxay siin karaan xorriyadda xirfadahaaga. Soojiid, keen processor Intel Core i9, 64 GB xusuusta DDR4 RAM iyo kaararka garaafyada Nvidia GeFoce RTX 2080 SUPER, kor u taagan. Waxay taageertaa unugyo badan SSD, oo la cusbooneysiin karo, sida taageerayaasha, sawirada iyo NUC. Waana in ay adeegsadayaashu u fududaan doonaan gelitaanka gudaha ee qalabka. Waad mahadsan tihiin dhamaan ballan qaad qufulka iyo dariiqa isjiidashada sanduuqaas furitaanka kumbuyuutar ayaa u baahan a dadaal yar. Beddelka qaybaha waxay noqotaa mid aad u fudud sidaa darteed nooc qalab ah looma baahna inuu furo furitaanka.
Razer Sila 5G router sidoo kale waa joogaa
Waxaa weheliya kumbuyutarka kombuyutarka kombiyuutarka ee aadka loo adkeeyay, oo ah nooc ka mid ah alaabada ciyaar ciyaar Mid cusub baan tusay router leh tikniyoolajiyadda Deg deg. The Fadlan 5G. Aaladaha loogu talagalay isgaarsiinta xawaaraha sare ee guriga.
Tani waxay bixisaa isku xirnaan WiFi 802.11ax 4 × 4oo runtii la qaadi karo. Waxaan hayaa batari dib loo isticmaali karo iyo jeexdin SIM si loo isticmaalo shabakadda 5G.